Ingena ejokweni leH-1 iHyundai Staria - Bayede News
Ingena ejokweni leH-1 iHyundai Staria
Ukuzihlela nokuqinisa amabhawodi yikhona okuyosiza iProteas
Ngesikhathi sifaka izithombe zayo ezinkundleni zokuxhumana emuva kancane kokwethulwa eThekwini kube nenkulu imvunge abantu bezibuza ukuthi ngabe luhlobo luni lwemoto lolu. Babodwa abacabanga ukuthi isebenzisa uphethroli, abanye bayifanisa nomkhumbi mkhathi. Empeleni iHyundai Staria ingena esigabeni sezimoto ezingama MPV, kanti okumqoka kakhulu ngayo ukuthi ivala isikhala sebhasi iH-1.
Bese kuphele iminyaka eli-11 iH-1 igqonqa kuleli, futhi kulesi sikhathi ikwazile ukuzitholela indawo ezinhliziyweni zabantu. Manje kwaHyundai bayayikhulula ejokweni indawo yayo ithathwa iStaria. Uma uzoyithi nhla ungazitshela ukuthi kusengumfanekiso wemoto ezokwakhiwa, kanti phinde sekuyiyo uqobo lwayo. Ihlukene ngezinhlobo ezimbili kukhona iExecutive, i-Elite, neLuxury okuyiyo esesigabeni esiphezulu. Ihlanganiswe ngobunono, bheka nje amalambu ayo angaphambili akubiza ukude ikakhulu kuhlobo lwe-Executive ne-Elite bese kuba iLED kwi-Elite.
Kwi-Executive ne-Elite i-grille yakhona ithi ayithathisele emawindini ezihlangothini bese kuthi iLuxury ibe ne grille abayibiza ngediamond ngemuva. Okunye okutholakalayo kwiLuxury iyona igrille ephothulwe ngebronze. Iyaqhubeka futhi ibronze ikapakele kwigrille, igudle ngasemalambini angaphambili, kuphawu nangasemasondweni.
Lonke uhlobo lweStaria luphuma nenjini engu 2.2 litre, 4 cylinder turbodiesel ekhiqiza amandla afinyelela ku 130kW netorque engu 430Nm. Wonke lamandla athunyelwa emasondweni ngokudlula kugearbox odonsa ngamagiya ayi-8 azishintshayo. Kumele ngibancome kwaHyundai ngokuqhamuka nigearbox othule ohlangene futhi odle ngamandla. Angeke kungimangaze uma iStaria kuba yibhasi elizodlisa kakhulu ngamaholidi ngoba livulekile, lase liba nensanda yezindawo zokubeka izinto. Kukhona elikwazi ukulayisha abantu abayi-9 kuzona zonke izinhlobo bese kuthi i-Executive kube khona elayisha abali-11. Uzokhumbula ukuthi iH-1 ibilayisha abantu abali-12, kodwa kulokhu basikhiphile esinye isihlalo. Okuhle ngalokhu ukuthi wonke umuntu onelayisensi usengakwazi ukuyishayela akudingeki ukuthi uze ube nePDP.
Naphezu kokuba ikwazi ukulayisha abantu abaningi kodwa izindaba ezinhle ngeStaria ukuthi uma nizihambela nomndeni noma nabangani, angeke nangengozi niyiswele indawo yokubeka izimpahla zenu bheka nje ngoba lena elayisha abantu abayi-9 inesikhala ongabeka kuso impahla esingama-1 303 litres, bese kuthi elayisha abali-11 ibe nesikhala esingama-1 024. Lena enguvala iLuxury inesikhala esingama-882, uma kulaliswe izihlalo zangemuva.
Emgwaqweni akungithusanga ukuthi indlela eshibilika ngayo, ifana ncamashi nendlela ebukeka ngayo. Indlela okuhlanganiswe ngayo isuspension yayo yenza ithule kuthi noma ingena ezindaweni ezingamabhampu kungazweli nakubagibeli. Ngesikhathi beyethula kwaHyundai bathi idla amalitha ali-8,71 ngebanga le-100km, ngivumelana nabo ngokugcwele kulokho kodwa futhi uma uyibamba ngendlela ungakwazi ukonga ngisho nangaphezulu kwalokho.
Staria R2.2 Executive 9 Seater AT R789 900
Imibuzo ngokuhluthulwa ugesi kukaNgalonkulu
Staria R2.2 Executive 11 Seater AT R799 900
Staria R2.2 Elite 9 Seater AT R959 900
Staria R2.2 Luxury 9 Seater AT R1 099 900
nguNgqeshe Buthelezi Nov 18, 2021